အဖေများနေ့မှာ ဖေဖေနှင့်အတူ စားသင့်တဲ့ ဆိုင်ကောင်းလေးများ - ဒိုးမယျ
ဖဖေတေို့ဆိုတာ စာရေးသူတို့အားလုံးရဲ့ လမျးပွကွီး ဖွဈရုံတငျမကပါဖူး။ အုကာအကှယျကို အသကျနဲ့လဲပွီးပေးတဲ့ စဈသူကွီးတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ ယခုလရဲ့ ၁၆ ရကျနဟေ့ာ နိုငျငံတကာ အဖမြေားနဖွေ့ဈပွီး ဖဖေတေို့ကို ဂုဏျပွုသငျ့ပါတယျ။ ခမျးခမျးနားနားကို ဂုဏျပွုဖို့ အတှကျ စာရေးသူကဒီနမှေ့ာ ခမျးနားပွီးထူးခွားတဲ့ နရောလေးတဈခြိူ့ကို ဖျောပွသှားမှာပါ။
ဒီနရောလေးတှကေ စြေးတော့အနညျးငယျကွီးပမေဲ့ မတူတဲ့ ပတျဝနျးကငျြအရသာကို ခံစားရမဲ့ အပွငျ ဖဖေတေို့နဲ့ ရှေးဟောငျးနှောငျးဖွဈလေးတှေ ပွောပွီး ထျိုငျရတာကလညျး အေးအေးဆေးဆေးရှိလှပါတယျ။ မွို့ပွအခကျြအခြာနရောတှမှော တညျရှိတာပါ။ ဘယျဆိုငျလေးတှဆေိုတာကို တဈခကျြလောကျဆကျကွညျ့ရအောငျနျော။
၁. Rangoon Tea House
လကျဖကျရညျကောငျးကောငျးကွိုကျတတျတဲ့ ဖဖေတေို့ အတှကျကတော့ တကယျ့ကို နတျပွညျပါပဲရှငျ။ မနကျစာ၊ နလေ့ယျစာ အပွငျ ညစာအတှကျပါ အဆငျပွပေါတယျ။ စြေးကတော့ နညျးနညျးလေးမြားပမေဲ့ တဈကယျလကျတှေ့ စားကွညျ့မှသိမှာပါ။ ပနျးဆိုးတနျးလမျးမပျေါမှာတညျရှိပါတယျ။
၂. Mel Zeit
ဆာကူရာဆေးရုံဘေးက လမျးထိပျမှာတညျရှိပွီး ဂြာမနျ အစားအသောကျတှရေပါတယျ။ အထူးအဆနျးအနနေဲ့ မွညျးစမျးလို့ရတဲ့အပွငျ ဘီယာကွိုကျတတျတဲ့ ဖဖေတေို့အတှကျဘီယာကောငျးကောငျးလညျးရပါတယျ။
ရနျကငျး စာတိုကျမှတျတိုငျနားမှာရှိတဲ့ ကြောကျကုနျးလမျး အတကျနားလေးမှာ ရှိတဲ့ ရှမျးရိုးရာ အစားအစာဆိုငျလေးပါ။ ထိုငျရတာလညျး အေးအေးဆေးဆေးရှိပွီး ရှမျးအစားအစာစဈစဈရဲ့ အရသာကို ခံစားလို့ရမှာပါ။ ဆိုငျအပွငျအဆငျလေးကလညျး တကယျကိုရိုးရာဆနျလှပါတယျ။
၄. O’thentic Bar
အနောကျတိုငျး အစားအစာတှထေဲကမှ ပွငျသဈအစားအစာကောငျးကောငျးတှေ ဖဖေ့ကေို့ ကြှေးမှေးခငျြတယျဆိုရငျတော့ဖွငျ့ ဒီဆိုငျလေးက အသငျ့တျောဆုံးပါပဲ။ ပီဇာအရသာအစဈအမှနျကို ဒီဆိုငျမှာ ရနိုငျပါတယျ။
ရတနာလမျးမအပျေါက အောငျရတနာဆေးခနျးအကြျောမှာတညျရှိပါတယျ။ လကျဖကျရညျဆိုငျဆို ပွီး အထငျသေးဖို့တော့ မတှေးလိုကျပါနဲ့။ မွနျမာမုနျ့ကနစေပွီး ဂပြနျကာရီဟငျးတှဘောတှတေောငျ ရပါတယျ။ အရသာလေးကလညျး သှားမွညျးပါ။ ဆီလေးကသနျ့ပွီး သနျ့ရှငျးသပျရပျမှုကတော့ တကယျ့ကို ပွိုငျစံရှားပါပဲ။ဖဖေတေို့က မနကျစာကောငျးကောငျးကွိုကျတတျကွတာမြားပါတယျ။
ယုံလားတော့မသိ။ တခြိူ့ဖဖေတေို့က မမေတေို့ထကျ တို့ခနဲ့ ဆိတျခနဲ့လေးတှေ စားဖို့ အဖျောညှိရလှယျပါတယျ။ စာရေးသူကတော့ လခထုတျရကျပဲချေါရဲပါတယျ။ တျောကွာ မနားတမျးစားရငျး တဈဆိုငျလုံးစာရှငျးနရေနိုငျပါတယျ။
ကဲ….ဖဖေတေို့ကို လကျလေးတို့ပွီး ချေါသှားရငျးနဲ့ စားရငျးသောကျရငျး အရငျတဈခြိနျက အမှတျတရလေးတှပွေောရငျးပြျောရှငျလိုကျကွပါ။
လောကကွီးက ခဈြစရာမိသားစုတိုငျး အပြျောမြားတိုးပါစဆေုတောငျးရငျး။
ဖေဖေတို့ဆိုတာ စာရေးသူတို့အားလုံးရဲ့ လမ်းပြကြီး ဖြစ်ရုံတင်မကပါဖူး။ အုကာအကွယ်ကို အသက်နဲ့လဲပြီးပေးတဲ့ စစ်သူကြီးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလရဲ့ ၁၆ ရက်နေ့ဟာ နိုင်ငံတကာ အဖေများနေ့ဖြစ်ပြီး ဖေဖေတို့ကို ဂုဏ်ပြုသင့်ပါတယ်။ ခမ်းခမ်းနားနားကို ဂုဏ်ပြုဖို့ အတွက် စာရေးသူကဒီနေ့မှာ ခမ်းနားပြီးထူးခြားတဲ့ နေရာလေးတစ်ချိူ့ကို ဖော်ပြသွားမှာပါ။
ဒီနေရာလေးတွေက ဈေးတော့အနည်းငယ်ကြီးပေမဲ့ မတူတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အရသာကို ခံစားရမဲ့ အပြင် ဖေဖေတို့နဲ့ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်လေးတွေ ပြောပြီး ထိုင်ရတာကလည်း အေးအေးဆေးဆေးရှိလှပါတယ်။ မြို့ပြအချက်အချာနေရာတွေမှာ တည်ရှိတာပါ။ ဘယ်ဆိုင်လေးတွေဆိုတာကို တစ်ချက်လောက်ဆက်ကြည့်ရအောင်နော်။
လက်ဖက်ရည်ကောင်းကောင်းကြိုက်တတ်တဲ့ ဖေဖေတို့ အတွက်ကတော့ တကယ့်ကို နတ်ပြည်ပါပဲရှင်။ မနက်စာ၊ နေ့လယ်စာ အပြင် ညစာအတွက်ပါ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဈေးကတော့ နည်းနည်းလေးများပေမဲ့ တစ်ကယ်လက်တွေ့ စားကြည့်မှသိမှာပါ။ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။
ဆာကူရာဆေးရုံဘေးက လမ်းထိပ်မှာတည်ရှိပြီး ဂျာမန် အစားအသောက်တွေရပါတယ်။ အထူးအဆန်းအနေနဲ့ မြည်းစမ်းလို့ရတဲ့အပြင် ဘီယာကြိုက်တတ်တဲ့ ဖေဖေတို့အတွက်ဘီယာကောင်းကောင်းလည်းရပါတယ်။
ရန်ကင်း စာတိုက်မှတ်တိုင်နားမှာရှိတဲ့ ကျောက်ကုန်းလမ်း အတက်နားလေးမှာ ရှိတဲ့ ရှမ်းရိုးရာ အစားအစာဆိုင်လေးပါ။ ထိုင်ရတာလည်း အေးအေးဆေးဆေးရှိပြီး ရှမ်းအစားအစာစစ်စစ်ရဲ့ အရသာကို ခံစားလို့ရမှာပါ။ ဆိုင်အပြင်အဆင်လေးကလည်း တကယ်ကိုရိုးရာဆန်လှပါတယ်။
အနောက်တိုင်း အစားအစာတွေထဲကမှ ပြင်သစ်အစားအစာကောင်းကောင်းတွေ ဖေ့ဖေ့ကို ကျွေးမွေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် ဒီဆိုင်လေးက အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ ပီဇာအရသာအစစ်အမှန်ကို ဒီဆိုင်မှာ ရနိုင်ပါတယ်။
ရတနာလမ်းမအပေါ်က အောင်ရတနာဆေးခန်းအကျော်မှာတည်ရှိပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆို ပြီး အထင်သေးဖို့တော့ မတွေးလိုက်ပါနဲ့။ မြန်မာမုန့်ကနေစပြီး ဂျပန်ကာရီဟင်းတွေဘာတွေတောင် ရပါတယ်။ အရသာလေးကလည်း သွားမြည်းပါ။ ဆီလေးကသန့်ပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုကတော့ တကယ့်ကို ပြိုင်စံရှားပါပဲ။ဖေဖေတို့က မနက်စာကောင်းကောင်းကြိုက်တတ်ကြတာများပါတယ်။
ယုံလားတော့မသိ။ တချိူ့ဖေဖေတို့က မေမေတို့ထက် တို့ခနဲ့ ဆိတ်ခနဲ့လေးတွေ စားဖို့ အဖော်ညှိရလွယ်ပါတယ်။ စာရေးသူကတော့ လခထုတ်ရက်ပဲခေါ်ရဲပါတယ်။ တော်ကြာ မနားတမ်းစားရင်း တစ်ဆိုင်လုံးစာရှင်းနေရနိုိင်ပါတယ်။
ကဲ….ဖေဖေတို့ကို လက်လေးတို့ပြီး ခေါ်သွားရင်းနဲ့ စားရင်းသောက်ရင်း အရင်တစ်ချိန်က အမှတ်တရလေးတွေပြောရင်းပျော်ရွှင်လိုက်ကြပါ။
လောကကြီးက ချစ်စရာမိသားစုတိုင်း အပျော်များတိုးပါစေဆုတောင်းရင်း။